Teboka vavaka hialana amin'ny famoizam-po amin'ny maha mpino | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hialana amin'ny famoizam-po amin'ny maha mpino anao
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka mba handresena ny fahaketrahana amin'ny maha-mpino antsika. Ny famoizam-po dia fanjakana ara-psikolojika diso an'ny -tsaina izay miantraika amin'ny ati-doha sy ny fo miaraka. Nandritra ny taona maro dia ny famoizam-po no antony lehibe namono tena ny tanora. Mampalahelo ny manamarika fa ny lahy sy ny vavy dia mijaly mafy indrindra amin'ity fahefana ity.
Ny lesoka iray ataon'ny ankamaroan'ny mpino dia ny fieritreretana ny finoana ho fialana amin'ny fahaketrahana. Na iza na iza dia mety ho ketraka na dia ny olon'Andriamanitra lehibe indrindra eto an-tany aza. Izany dia manazava ny antony tsy tokony hiheverana ny fahaketrahana. Betsaka ny zavatra miteraka fahaketrahana amin'ny mpino. Ny sasany dia ao anatin'izany ny krizy ara-bola, ny filan'ny ota sy ny tsy fahamarinana, ny tsy fahombiazana, ny tahotra ary ny stigma.
Raha voalaza fa ny olona rehetra mety ketraka na mpino na tsia. Na izany aza, ny mampisaraka ny finoana amin'ny hafa dia ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahin 'Andriamanitra dia misy foana hanampy antsika amin'ny fahaketrahana. Ny apôstôly Peter dia niaina fahaketrahana taorian'ny nandavany an'i Kristy intelo alohan'ny nandehanan'ny akoho. Nahatsiaro ho ratsy tamin'ny zavatra nataony izy ary nahatsapa karazana fitokana-monina tamin'ny ambiny noho ny zavatra nataony. Na izany aza dia afaka nahita ny làlany niverina tamin'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny fanampian'Andriamanitra izy. Nandritra izany fotoana izany dia lanin'ny fahaketrahana i Jodasy Iskariota satria namono tena izy. Tsy zakany ny vokatry ny nataony tamin'i Kristy, navelany hitondra ny mavesatra azy ny vesatry ny fahaketrahany, izay nitarika ny fahafatesany.
Ara-dalàna ny famoizam-po ho an'ny olona rehetra na inona na inona satanany na kaliberany. Ny fivoahana amin'izany no mahasamihafa azy. Mampahatakatra antsika ny soratra masina fa ny fanahy masina dia mpampionona. Rehefa ketraka isika, ny zavatra tsara indrindra ilaintsika amin'izao fotoana izao dia ny mpampionona. Mila zavatra na olona iray izay hampitony ny fanaintainantsika isika ary hanaisotra ireo alahelo ao am-po. Izay mampiavaka antsika amin'ny maha mpino antsika dia manana ny fanahy masina isika hanampy antsika amin'ny toe-javatra rehetra. Rehefa mahatsiaro ketraka na misintaka amin'ny tontolo ivelany ianao dia miangavy mba hivavaka ireto vavaka manaraka ireto.
2 Timoty 1: 7 Fa ny Fanahy nomen'Andriamanitra antsika tsy manome antsika sanganehana, fa manome hery sy fitiavana ary fifehezan-tena. Tompoko, mivavaka aho mba hamonjen'ny fanahinao ahy amin'ny karazana fanahiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga amin'ny fanoherana ny endrika tahotra sy tahotra rehetra ao am-poko amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Filipiana 4: 6-7 Aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny toe-javatra rehetra, dia asio amin'Andriamanitra ny fangatahanareo amin'ny fivavahana sy amin'ny fangatahana. Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiambina ny fonareo sy ny sainareo ao amin'i Kristy Jesosy. ” Mivavaka aho mba ho tonga amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadananao izay mihoatra ny fahalalana ny olona.
Ny soratra masina dia milaza fa tsy hisy lamaody fitaovam-piadiana hamely ahy. Tompoko, aringako tsy ho any an-davaka ny zana-tsain'ny fanahiana sy ny fanahiana rehetra, manapa-kevitra aho fa tsy hanana fahefana amiko amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo.
Mivavaka aho mba hofongan'ny rivotr'Andriamanitra ny endrika tahotra rehetra miposaka ato am-poko anio amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra hoe: Tsy nomena ny tahotra isika, fa ny Zanakalahy hitomany Ahba ray. Tonga amin'ny fanoherana ny tahotra sy ny fanahiana amin'ny fiainana anio amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hanaloka ny fiainako amin'ny fitiavanao. Ny fitiavanao dia mihoatra ny fahalalan'ny olona. Mivavaka aho fa na dia iharan'ny fanilihana sy fanokanan-toerana amin'ny olona manodidina ahy aza aho, ny fitiavanao dia hahatonga ny foko hahita fiadanam-po sy fanekena amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny tarehin-javatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainako izay miteraka fanaintainana sy fanahiana, mivavaka aho mba hamindranao azy ireo anio amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny ady rehetra amin'ny fiainako, ny zava-tsarotra atrehiko rehetra, mivavaka aho mba homen'ny herinao fandresena amiko anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, izay olana rehetra eto amin'ny fanambadiako izay mitondra alahelo ato am-poko, mivavaka aho mba hamahanao azy ireo anio amin'ny anaran'i Jesosy. Nampahalala ahy ny teninao fa maro ny fahorian'ny marina, nefa mahatoky ny TOMPO hamonjy azy amin'izany rehetra izany. Tompoko, mivavaka aho mba hamahanao ny olana rehetra amin'ny fanambadiako amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny endrika tsy fahombiazana sy fahadisoam-panantenana rehetra izay miteraka fanaintainana sy fahatezerana eo amin'ny fiainako dia mivavaka aho mba hamahana azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, mivavaka aho mba hamotsahanao balsama mampitony ny fanaintainana rehetra amin'ny fiainako anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako izay iaretako fisedrana ara-bola dia mivavaka aho mba ho tonga amin'ny anaran'i Jesosy ny vatsy. Voasoratra fa Andriamanitra hanome izay rehetra ilaiko araka ny haren'ny voninahiny amin'ny alalàn'i Kristy Jesosy, mivavaka aho mba hialana amin'ny arak'i Jesosy ny fahoriako.
Tompoko, mivavaka aho mba hamenoanao ny fiainako amin'ny fitiavana, fahafaham-po ary fahafaham-po. Tompoko, tsy mety mihazakazaka amin'ny hazakazaky ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy aho. Omeo ahy ny fahasoavana hilentika amin'ny fahafaham-poko amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny fahakiviana rehetra noho ny fahasalamako miharatsy dia ringana amin'ny anaran'i Jesosy. Milaza ny fanasitranako amin'ny tena izy amin'ny anaran'i Jesosy aho. Izaho dia miady amin'ny herin'ny aretina rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, mananatra ny famoizam-po amin'ny anaran'i Jesosy aho. Manafoana ny fihazonana fahaketrahana rehetra amin'ny fiainako anio amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ny fototry ny fahaketrahana rehetra amin'ny fiainako dia mirehitra ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Miteny amin'ny anarana izay ambonin'ny anarana hafa rehetra aho, ny iota alahelo rehetra amin'ny fiainako dia nesorina tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka mba hitsodrano trano vaovao
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanahin'ny ranomasina
Oguche Godwin 25 Jolay 2021 Amin'ny 8:56 hariva
Faly be aho ary faly tokoa mahita ireo vavaka tena tadiaviko eto, mivavaka aho mba hamalian'Andriamanitra ny fivavahantsika amin'ny fony feno famindram-po amin'ny anaran'i Jesosy 🙏
mpiasa mpiasa 1 aogositra 2021 Amin'ny 9:33 hariva
Amena amena amena. Ary faly izahay mahita fa mahasoa ireto teboka vavaka ireto.
Krzysztof 6 aogositra 2021 Amin'ny 7:53 maraina
Krzysztof 6 aogositra 2021 Amin'ny 7:50 maraina
20 Ireo teboka vavaka amin'ny MFM manohitra ny trosa amin'ny razana